Donalda Trump oo sheegay in uu ka baxayo heshiiskii Nukleerka ee Ruushka kala dhexeeyay – XOGMAAL.COM
Donalda Trump oo sheegay in uu ka baxayo heshiiskii Nukleerka ee Ruushka kala dhexeeyay
Wuxuu soo hadal qaaday sababta madaxweynihii hore ee Mareykanka Brack Obama uu uga hadli wayaay arrintaasi in uu ka boxo gebi ahaanba ama in wadaxaajoog laga galo ayuu sheegay in uusan ogayn sababta ay siddaasi ku dhacday,balse isaga uu ka bixidoono.
Donalda Trump Madaxweynaha Mareykanka oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii Nuclearka ee horey ay u wada galeen Ruushka iyo Mareykanka.
Heshiiskaasi oo labada dowladooda wada gaareen 1987-dii islamarkaana mamnuucayay gantaal-rakibo dhexdhexaad ah, oo leh tiro u dhaxaysa 500 ilaa 5,500km (310-3,400 mayl) ayuu ku sheegay madaxweyne Donalda Trump in uu jebiyay Ruushka,islamarkaana aan ogolaan doono in talaabo dhinaca Nuclearka ah oo ay qaado Rashiya,iyadoo aan loo ogoleyn Mareykanka.
Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in arrintani aysan micneheedu ahayn in Mareykanka uu Midowga Yurub cadaadis uu uga imaanayo,isagoo xusay in dhaq dhaqaaqa Ruushka uu horseedi karo loolan hor leh oo dhanka hubka ah.
Dhanka kale Wasiirka Arrimaha dibadda Ruushka ayaa laga soo xigtay in uu sheegay in talaabadan ay gadaal ka riixayaan dowlado kale,wuxuuna xusay in aysan ahayn wax sidaa u balaaran oo muran dhalinkara gantaaladeeda ridada dhexe.
Balse Mareykanka ayaa ku adkeysanaya in Ruushka uu awood u yeelan karo in uu helo sawaariiq uu ku weerari karo wadamada ku bohoobay Gaashaanbuurta NATO.
Ogoow Arrimaha looga hadlayo Shirka Asmara ku dhex maraya Itoobiya iyo ONLF